Tag: datasift | Martech Zone
Alarobia, Novambra 16, 2011 Talata, Septambra 25, 2012 Douglas Karr
DataSift dia sehatra fanivanana angona haino aman-jery sosialy mahery ary iray amin'ireo orinasa roa manerantany miaraka amin'ny fahazoan-dàlana hametraka ny angona Twitter ho ara-barotra ho an'ny tanjona tsy aseho, mamela ny mpampiasa hikaroka lahatsoratra mampiasa metadata voarakitra ao amin'ny bitsika. Ary manao izany amin'ny alàlan'ny rindrambaiko mahafinaritra tsy mampino ary koa console hampivoatra sy API matanjaka (tranombokin'ny mpanjifa misy) miaraka amin'ny fiteniny manontany. interactive.content NA INDRINDRA "HTC, Nokia, RIM, Apple, Samsung, Sony" DataSift dia natsangan'i
Ny herin'ny lohahevitry ny WordPress roapolo ambin'ny folo
Alatsinainy, Aogositra 29, 2011 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Nandritra ny faran'ny herinandro dia natodiko tany amin'ny Twenty Eleven ny lohahevitra WordPress-ko. Afaka milaza am-pahatsorana aho fa faly amin'ny famolavolana izao. Namboariko araka izay tiako izany ary tsy mila mikasika ilay kaody akory aho. Aza diso hevitra aho, misy fotoana tiako ny milentika anaty lohahevitra ary mamaky ny banga avy ao aminy, saingy sarotra ny mitoraka bilaogy. Tsy mila adin-tsaina fanampiny aho
Alakamisy, May 12, 2011 Alahady 19 Janoary 2014 Douglas Karr
Mampihomehy, vao niresaka tamin'ny masoivoho iray aho tamin'ity maraina ity momba ny fahasarotan'ny lohatenin'izy ireo ao anatin'ny WordPress. Ho an'ireo olona toa antsika izay sady mpandrindra PHP dia nahavita lohahevitra sy plugins an-taonina ary mahatakatra tsara ny WordPress API, tsy ratsy izany. Mampalahelo fa tsy tratry ny orinasa sy olona sasany izany. Fehiny: ny fiantsoana mpamorona isaky ny maniry ny hanova ny layout na ny lohahevitrao dia mety lafo!